Triveni Online - Page 10 of 432 - News of Nepal
काठमाडौं— पत्थरीको समस्या आजकल धेरैजनालाई हुने गर्छ । मिर्गौलामा पत्थरी भएपछि असहनीय पीडा हुन्छ । गलत खानपिन र कम पानी पिउने बानीले पत्थरी हुन्छ । पत्थरी हुनुअघि शरीरले विभिन्न संकेतहरू दिन थाल्छ । तर मानिसहरू त्यसलाई बेवास्ता गरिबस्छन् । यहाँ हामी केही त्यस्ता संकेतका बारेमा बताउँछौं जसलाई पटक्कै बेवास्ता गर्नुहुँदैन …
कम्मर र नसा च्यापिने कारण र रोकथामका उपायहरू यस्ताे छ
मेरुदण्डमा टाँसिएका मांसपेशीहरूले ढाडलाई मोड्न तथा चलाउनलाई सहयोग गर्दछ । यी ढाडका हड्डीहरूमा स्पाइनल क्यानले नामक लम्ववद्ध प्वाल हुन्छ जसबाट स्पाइनल–कार्ड नामक मुख्य स्नायू नसा गुज्रिएको हुन्छ र हरेक हड्डीको दायाँ“–बायाँ“ स्पाइनल फोरिमान नामक प्वालहुदै स्पाइनल–कार्ड बाट स्पाइनल नर्भहरू (साना स्नायू नसा ) निस्किएका हुन्छन् ।यी नसाहरू ढाडको स्पाइनल–कार्ड वाट …
बालबालिकालाई सिकाउनुहोस् यी ९ कुरा, कहिल्यै बिरामी हुँदैनन्
हामी चाहन्छौं, आफ्ना बच्चा स्वस्थ होस् । तन्दुरुस्त होस् । तगडा होस् । बलियो होस् । फूर्तिलो होस् । सधै सक्रिय र उर्जावान् होस् । यसका लागि कामना गरेर मात्र पुग्दैन, उनीहरुलाई केही कुरामा अभ्यस्त गराउनुपर्छ । बच्चाहरुलाई सफा र चिरिच्याट्ट बनाइदिएमा उनीहरु स्वस्थ मात्रै रहदैनन्, उनीहरुको आकर्षण र आत्मविश्वास …
हाम्रै घर तथा वरपर पाईने कतिपय यस्तो चिजहरु जसको प्रयोग र फाइदाको बारेमा हामी अन्जान रहेका हुन्छौँ र सानो समस्यामा पनि केमिकल युक्त बजारमा पाईने औषधी सेवन गर्ने गर्छौँ । कतिपय घरेलु जडिबुटीले पनि धेरै किसिमका स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । आज हामी त्यहि जडिबुटीको रुपमा लिईने अम्बाको पातको …
एजेन्सी। मेथीदानामा अत्यधिक पौष्टिक तत्व पाइन्छन् । यसलाई राती भिजाएर बिहान खाली पेटमा मज्जाले चपाएर खाँदा र यसको पानी पनि पिउँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्यालाई फाइदा पुर्याउने गर्दछ । के हुन् मेथी दानाका फाइदा ? भारतको उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयका स्वस्थ वृत्त विभागका एचओडी डा. अवधेश मिश्राका अनुसार मेथीले भोक बढाउँछ र …
झुकिएर पनि गर्नु भएमा आइलाग्नेछ दुखको बज्रपात ! पूजा गर्दा गर्नै नहुने १० कार्यहरु हेर्नुहोस् !
सुखी र समृद्ध जीवनको लागि देवी-देवताहरुको पूजा गर्ने परम्परा लामो समय देखी चलिआएको छ। आज पनि धेरै मानिसहरु यो परम्परामा अधिक विश्वास गर्दछन्। हाम्रो इच्छाहरू पुजाआजा गरेर पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास रहिआएको छ , तर पूजा गर्दा केही विशेष नियमहरू पालना गर्नुपर्छ। यी कुराहरू सामान्य पूजा-आजामा पनि ध्यान राख्नुहोस्। यी कुराहरुमा …
2 weeks ago	JyotishMantra 0
यदि तपाईले जति जे गरे पनि पैसा जोगाउन सकिरहेको छैन भने यसो गर्नुहोस। घरको मुख्य ढोकामा शनिबारको दिन सर्स्युको तेलको दीपक बाल्नुहोस्। दीपक निभीसकेपछि यदि तेल बाकी रह्यो भने उक्त तेललाई सान्ध्यको समयमा पिपलको वृक्षमा चढाईदिनुहोस। ७ शनिबारसम्म लगातार यसो गर्नाले धनको कमि हुदैन। यसो गर्नाले तपाइको हातमा पैसा सधै …
ग्यास्ट्रिकको उपचार, क्षणभरमै यसरी लाभ लिन सकिन्छ
अनियमित जीवनशैली र खराब खानपानका कारण एसिडिटी बढेर दुःख पाउनु आधुनिक जीवनशैली अपनाउने हामी सबैका लागि सामान्य कुरा हो । अमिलो पानी बढ्दा देखिने एकप्रकारको समस्यालाई एसिड रिफ्लक्स भनिन्छ । जब लोअर एसोफेगल स्पिंचर (एलईएस)ले राम्रो काम गर्दैन र अन्ननली हुँदै अमिलो पदार्थ पेटको माथिल्लो भागतिर जान थाल्छ, यस्तो अवस्थालाई …
तीनवटा पहाड फोडेर ३६ वर्ष लगाएर गाउँमा पानी ल्याउने यी व्यक्ति ! सम्मान सोरुप सबैले १ /१ शेयर गर्नुहोस !!
2 weeks ago	Story 0
चीनको गुइजहाउ प्रान्तमा रहेको सानो गाउँको जीवनस्तरलाई सुधार्नका लागि ह्वाङ दफाले १० किलोमिटर लामो पानीको नहर बनाउन तीनवटा पहाड फोडे जसका लागि उनलाई ३६ वर्ष लाग्यो । कोआवाङ्बा गाउँका प्रमुख ह्वाङ दाफाले सन् १९५९ देखि उक्त योजना सुरु गरेको र यसका लागि उनले आफ्नो जीवनको ३६ वर्ष कडा परिश्रममा लगाएर …